मे 5, 2017 अगस्ट 9, 2017 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments लक्ष्मण राजबंशी, शिक्षा र राजनीति, सांसद
संसदमा सत्ता र शक्तिको पछाडि नभई नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको सवालमा कसैसंग पनि शिर नझुकाई अडान लिएर सच्चा नेपाली आमाको सांसदको रुपमा बुलन्द आवाज निरन्तर उठाउदै आउनु भएको छ । उँहाले आजसम्म आफ्नो शिर कसैसँग पनि झुकाउनु भएन । देशको राजनीतिक अवस्था, ठुला राजनीतिक दल र तिनका नेता, देशमा शिक्षाको बर्तमान अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहँदै साईन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिकाका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
सर्वप्रथम वास्तवमा म मेरो वाल्यकालको बारेमा केहि बताउन चाहन्छु । म राणाको व्यवहारवाट कुर्द भएको मान्छे । मैले जिन्दगीमा जुद्ध शम्शेर, पद्म शम्शेर र मोहन शम्शेर तीनै जना राणा प्रधानमन्त्रीको ब्यबहार भोगेको छु । मेरो बाल्यकालमा हाम्रो १०।१२ जनाको ठुलो परिवार तर हाम्रो घर चाही सानो डेढ तले मात्र थियो । त्यस समयमा पद्म शम्सेरको सिन्दुर जात्रा चाही हाम्रै घर मुनिवाट लैजानुपर्थ्यो र त्यो बेला ३ महिनादेखि हामीलाई घरवाट निकाली दियो र पालले पुरै घर ड्याम्म छोपिदियो त्यो बेलाको पीडाले मलाई घोचो । त्यसपछि फेरि मोहन शम्शेरको पनि सिन्दुर जात्रा हुँदा पनि हामीलाई घरवाट निकाली दियो । ठुलो परिवार के खाने कहाँ बस्ने एकदमै गाह्रो भयो । त्यसपछि राजनीति नबुझेपनि त्यो ब्यबहारले राणाप्रति ममा घृणा पैदा भई म बिद्रोही भए । पछि नेपाली कांग्रेसको क्रान्ति भयो म पनि जानी नजानी झण्डा लिएर म पनि हिडे । तर पछि मोहन शम्शेर प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली काँग्रेसको क्रान्तिप्रति बिश्वास हटेर घृणा पैदा भयो । पछि २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भई म त्यसको संस्थापक सदस्य भए । जसले गर्दा मेरो राष्ट्र र जनताप्रतिको सच्चा राष्ट्रिय भावना अझ धेरै सवालीकृत हुदै गयो । कुनै अन्याय र अत्याचारको बिरुद्ध आवाज उठाउन मलाई गाह्रो नभएकोले म ६।७ पटक जेल जीवन बिताए । त्यसपछि एक जना शिक्षक भएकोले मैले हासिल गरेको शिक्षा के भने सत्य बोल्ने वानी बिद्यार्थी र सवैमा मानिसमा निडर भएर राख्ने कर्तव्य भएकोले अझसम्म आईरह्यो । अनि संसदमा बोल्दा पनि सत्ता र शक्तिको प्रभावमा नपरी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको सवालमा कसैसंग पनि शिर नझुकाई अडान लिएर बोल्ने साहस ममा आईरहन्छ ।
मैले अझसम्म ५५।५६ जिल्ला डुली सके । २०१७ सालपछि भारतमा निर्वासन जीवन बिताउनु पर्यो । दिनको ४ वटा चापटी, चनाको दाल एक कचौरा र दुई वटा हरियो खोर्सानी टोकेर दिन बिताउनु पर्थ्यो । त्यसपछि पार्टीले अव तिमीले सामान्तवादको बारेमा भित्रदेखि बुझ भनेर पठाएकोले ३ बर्ष पार्टीको अखिल किसान संघमा बसेर काम गरे । २०४५ सालमा पहिलो पटक चुनाव हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीले मलाई पाल्पामा खटाएको थियो । लगभग ३ महिना त्यहाँ काम गर्दा अधिकांश मगरहरुको घरमा दिन बिताए । त्यसपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न गाउँहरुमा भूमिगत जीवन बिताए ।
वास्तवमा जीवन भनेको के हो भन्न अत्यन्तै गाह्रो छ । मा पनि पहिला पहिला भन्ने गर्थे जीवन भनेको संघर्ष हो तर मलाई त्यस्तो पनि लागी रहेको छैन किनभने जीवनमा सघर्ष सधै गरिदैन । भईपरी आएको परिवर्तनले सिर्जना गरेको परिस्थितिसँग साक्षात्कार गरी अघी बढीरहनु नै जीवन हो । मानिसलाई परिस्थितिले परिपक्क बनाउदै लैजान्छ । परिस्थितिसँग हातेमालो गरी भविष्यमा आफ्नो आँखा अघि भएको सुन्दर सपना सजाएर अघि बढी रहनुपर्छ ।
राजनीतिमा लाग्दा भूमिगत जीवन, निर्वासन जीवन र पटक-पटक बन्दी जीवन पनि बिताउनु भएको थियो । सुनेको थिए एस.एल.सी. पनि जेलवाटै दिनुभएको थियो । यसको बारेमा छोटकरीमा बताई दिनुहोस न ।
वास्तवमा शिक्षा र राजनीति एक अर्कावाट छुटटाउनै नसकिने शरीर र आत्मा जस्तै हुन् । शिक्षा आत्मा हो र राजनीति शरीर हो । तपाईले यदि राम्रो शिक्षा पाउनु भएको छ भने तपाईको सबै क्रियाकलाप त्यही वाट संचालित हुन्छ । आत्मबिश्वासको आधार भनेको तपाइको शिक्षा नै हो । तपाईको जति बलियो शिक्षाप्रर्ति आस्था छ तपाईको आत्मबिश्वास त्यति नै बलियो भएर जान्छ । साच्चै भनेको हो मैले घमण्ड गरेर बढाई-चढाई गरी भनेको होइन; आजसम्म मैले कसैको अगाडि शिर झुकाएको छैन किनभने मैले बेईमानी गरेकै छैन । तपाईलाई थाहा होला केहि समय पहिला मलाई मधेशी पार्टीको एजेण्डालाई समर्थन गरी संबिधान संसोधनमा सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर त्यसबेलाको मेरो नेपा: पार्टीवाट नै मलाई दवाव आयो । मैले त्यो नमान्दा मलाई पार्टीवाट नै निस्काशन भएतापनि त्यसले मलाई केहि फरक नपरी मेरो बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई नयाँ पार्टीको पो जन्म भयो । अहिले मेरो आफ्नै पार्टी भएकोले गर्दा म स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो बिचार राख्न सक्ने भए । मैले मेरो आत्मालाई नबेचेको हुनाले मैले जिते ।
राजनेता भनेको त्यो हो जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि पहिला राष्ट्रलाई केन्द्रमा राक्छ । खास एउटा गुठ र पार्टीमात्र नभई उसले आफ्नो भन्ने सवै हो भन्ने भावानको अनुभुती दिन सक्छ । यसको आँखाले अरु केहि नदेखी राष्ट्र र जनता मात्र देख्छ र तिनीहरुको बारेमा मात्र सोच्छ । नेपालमा अझसम्म नेपालमा त्यस्तो कुनै राजनेता देखेको र पाएको छैन । म महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलालाई राजनेताको रुपमा मान्छु । तर जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो छोरी इन्दिरा गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने त्यसपछि उसको नातिलाई बनाउनुपर्ने जस्ता व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेकोले गर्दा जवाहरलाल नेहरु राजनेता हुन सकेन ।
म चाहि नेवार राजवंशी हु । तर यसको बारेमा खोज अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तराईमा बस्नु हुने चौधरी, थारु र राजबंशी जसलाई पैसा हुँदा चौधरी र गरीव हुँदा थारु तथा वीचकालाई राजबंशी भन्ने चलन छ । मलाई लाग्छ हामी पनि त्यहि बंशवाट आएको हो की पछि हामी छुट्ययौ की जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो शरीर, अनुहार उनीहरुसंग ठयाक्कै मिल्छ । मेरो बुवाले भने अनुसार धेरै पहिला हाम्रो बंश चाहि मल्ल कालमा बनारसवाट आएको रे अनि त्यस समयमा दरवारमा सल्लाह दिनको लागि मान्छेको खोजी भई रहेको बेला हाम्रा सबभन्दा पहिला आउने पूर्वज चाहि धेरै विद्वान हुनाले उहाँलाई बोलाई कुरा गर्दा राजाको चित्त बुझेकोले गर्दा उक्त राजाले छोरी दिई जुवाई बनाएर पनौतीको नजिक पुर्कोटमा दरवार बनाएर राखेको भन्ने कुरा छ ।
प्रिन्सिपल हुँदा आत्मगलानी हुदैन । प्रिन्सिपल ठुलो मान्छे नै होइन किनभने प्रिन्सिपल कसको अभिभावक भन्दा बिधार्थीको हो । ती बिधार्थीहरु भन्दा ठुलो मान्छे भनेर घमण्ड गर्नु भएन । तर सांसद हुँदा यो लोगोले आफै घमण्ड आउछ र केहि आत्मबिश्वास पनि आउछ । तर सांसद हुँदा अलि सम्मान पनि बढ्छ र समाज ले हेर्ने दृष्टिकोण अलिफरक हुन्छ । यी नेताहरु र सांसद हरुले देश र जनताको बारेमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको हुनाले यो पदले गर्दा आत्मगलानी पनि हुन्छ ।
जीवनमा भएका अविस्मरणीय र रमाईला क्षणहरुको बारेमा बताईदिनु होस् न ?
नोभेम्बर 20, 2017 डिसेम्बर 5, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0